トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Umahluko phakathi Umbono kokomoya wokusiwa
Ngaba uyawazi umahluko phakathi umbono yokomoya wokusiwa?
Bobabini bakholisa ukungaqondeki kuba yenye into efanayo kakhulu. Makhe Mandiphinde ngokufutshane apha.
lo mbono ngokomoya
Yintoni na umbono ngokomoya. amaxesha amaninzi kule sayithi nayo ichaza, kodwa umbono izangoma kokomoya ibonakalisa umfanekiso engqondweni yabo, i iteknoloji ukuba ukubukela ihlabathi ukuba kubonwa. Ngenxa yoko, ufumana umyalezo ovela umoya umgcini, uyakwazi uxelele leMibuzo.
imimoya umgcini, abo bonke abantu, kuba phambi eziya ukukhusela ubomi babantu bayo. Yeyona ubukho oya kukhupha isilumkiso xa uzama Susumo kwicala engalunganga, kodwa akukho nesikunikwayo thina bantu izangoma abaqhelekileyo abayi kuba nako ukufumana umyalezo. I mna ndithi kuni ukukwamkela oko endaweni imbono ezizezoMoya, izangoma. umbono ngokomoya
, ngokuxhomekeke kwamaza kunye zokungahambisani ezingxoxo umntu izangoma, kukho akulingani (differences ngamnye) kule vidiyo ukuze zibonakale, kukuba akukho ukuze ivele kwi ecacileyo. ehambelanayo
ilungile, kodwa na kungaba izangoma anobunkunkqele ekuthetheni amatyala, ngoko ukuze ngenye yehla, kuba kwiimeko ezingxamisekileyo, ngandlel 'ithile, ezifana koogqirha, imimoya ehambelanayo elungileyo kwakhona bekuya kuba kuhle ukuba sihlale ukufumana ubuchule umntu.
emehlweni umntu bavele phambi kukuthi, "Ngaba umphefumlo iwele", "Did you mean, lo mntu iqabane umphefumlo wam?" ukusuka ndicinga, ixesha kwafuneka ukuba uphawulo kakuhle izangoma baya kuphoswa ithuba.
Kwelinye icala, wokusiwa lajongana amaza erediyo, ngokuthatha umfowunelwa ihlabathi alibonakali ingafani kwamaza loo mntu namandla, zibe ngumtshangatshangiso, yinto nonxibelelwano.
phambili ukuthatha kumfowunelwa, umzekelo, i-Higher Self (ngokwakho-high ntathu).
oku Ethetha ngokwakho-high mbini, kodwa uya kuba umelo nzima, ndicinga ukuba ukuqonda lula ukuba kunokwenzeka mfutshane ingqalelo ixesha ilizwi lakhe nice.
ngezizathu ezithile andazi umsebenzi kunye nothando nalo uqhubeka ifomu top wayefuna karhulumente, ezabo xa singena umjikelo onesidima, ezifana hamba kakuhle nokuba wenza ntoni, ukuba ayikho ngaphezulu.
Higher Self kwenziwa imibuzo lo ienjini kwabantu, ufumanisa ukuba uhlobo myalezo okanye kunqumama ukusuka kwixesha wedwa isandi elungileyo ngokungena apho.
Ngaphandle, wena okanye nezaziwa ngokuba ngokugqithisela ufikelelo kwirekhodi Akashic.
Akashic irekhodi kwaye, ulwazi kunye neemvakalelo zonke iindidi ukususela ekuqaleni iphela eziphilayo, inkumbulo kunye bekusoloko indawo iye yabhalwa (hayi kwindawo ebonakalayo ukuze wokwenene), ezifana kwithala efini Internet Ukuqwalasela ecinga kuya kuba lula ukuba umfanekiso.
e kubekho ufikelelo, ubomi elidlulileyo kunye umphefumlo womntu ukhathazekile, injongo, uya kukwazi ukufikelela iindidi zolwazi, ezifana kwekamva.
of usixelele ukuba ukukhuphela ulwazi oluyimfuneko nina irekhodi Akashic ngokugqithisela channelers ngokuthanda noosiyazi.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ekubeni ulwahlulohlulo yasemsebenzini mfiliba kakhulu, kwanokuba akukho mfuneko bebanga channeler, umcebisi ngokomoya noosiyazi, kusenokwenzeka ukuba nangokuqhuqha abantu wayecela abaxeli-mathamsanqa. _
Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ekubeni ulwahlulohlulo yasemsebenzini mfiliba kakhulu, kwanokuba akukho mfuneko bebanga channeler, umcebisi ngokomoya noosiyazi, kusenokwenzeka ukuba nangokuqhuqha abantu wayecela abaxeli-mathamsanqa. 0D_ Higher Self kwenziwa imibuzo lo ienjini kwabantu, ufumanisa ukuba uhlobo myalezo okanye kunqumama ukusuka kwixesha wedwa isandi elungileyo ngokungena apho.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ekubeni ulwahlulohlulo yasemsebenzini mfiliba kakhulu, kwanokuba akukho mfuneko bebanga channeler, umcebisi ngokomoya noosiyazi, kusenokwenzeka ukuba nangokuqhuqha abantu wayecela abaxeli-mathamsanqa. 00D_
Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ekubeni ulwahlulohlulo yasemsebenzini mfiliba kakhulu, kwanokuba akukho mfuneko bebanga channeler, umcebisi ngokomoya noosiyazi, kusenokwenzeka ukuba nangokuqhuqha abantu wayecela abaxeli-mathamsanqa.